NAD + amin'ny fahanterana: Ny anjara asan'ny (NR) Nicotinamide Riboside Chloride azo avy amin'ny anti-fahanterana
Nicotinamide riboside (NR) sy nikotinamide riboside (Chloride)
Ny Nicotinamide riboside (NR) chloride dia endrika kôlômbôla iray an'ny nikotinamide riboside (NR).
1.Inona ny atao hoe Nicotinamide Riboside (NR)?
Ny NR dia endrika vitamina B3 na niacin. Ny fitambarana dia hita tamin'ny taona 1940 ho fitomboan'ny H. gripa. Amin'ny fiandohan'ny 21st taonjato maro, fanadihadiana maro no nanaporofo fa i NR dia mpialoha lalana an'ny NAD +. Ao amin'ny vatan'olombelona, ​​io otrikaina io dia mampihena ny haavon'ny kôlesterôla, manalefaka ny mety hisian'ny aretim-po kardia, mampitombo ny fiasan'ny ati-doha ary manamaivana ny aretin-tratra.
Ny Nicotinamide riboside (NR) dia pyridine-nucleoside, alohan'ny mialoha ho an'ny NAD + (Nicotinamide adenine dinucleotide). Ny NAD + dia mandrehitra ny ankamaroan'ny asa biolojika ao anatin'izany ny fanamboarana ADN, ny famokarana angovo sela, ny fametrahana ny gadona sirkadian'ny vatana, sy ny maro hafa. Mampalahelo fa mihena ho azy ireo molekiola ireo amin'ny fahamaimaizana.
2.Inona no atao hoe Chloride Nicotinamide Riboside (NR)?
Ny Nicotinamide Riboside (NR) chloride (NIAGEN) dia avy amin'ny NR sy klôro. Ny fitambarana dia mampitombo ny haavon'ny NAD + ary mampihetsika ny SIRT1 sy ny SIRT3. Miverina ny fahanterana amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny metabolisma oxidative sy ny fanoherana ny comorbidities metabolika mifandraika amin'ny sakafo.
Aty Etazonia nikôtinamidid klôrozôro riboside amin'ny ankapobeny dia ekena ho azo antoka. Noho izany, izy io dia mpiorina amin'ny sakafo ankatoavina ampiasaina amin'ny fikorontanana proteinina, rano vitaminina, siligaoma ary mifandraika amin'izany fanampin-tsakafo.
Ny olombelona dia nanohitra ny fahanterana tamin'ny alàlan'ny fikendrena ny hoditra. Nisy fotoana dia tsy maintsy sendra sendra ny sasany ianao anti-fahanterana menaka fanadiovana ny ketrona amin'ny tarehy, hoditra somary volo, ary tasy. Na izany aza, ireo fitsaboana ireo dia mikorontana ary vetivety. Ny fomba azo antoka fahanterana am-pahasoavana dia amin'ny alàlan'ny fametrahana ny fiovana biolojika ao ambadiky ny fahanterana sy ny fiatrehana ny fotony.
Ny mpikaroka dia nametraka ny fifandraisana misy eo amin'ny haavon'ny NAD + ambany sy ny aretina mifandraika amin'ny taona. Ity fahitana ifotony ity dia ilay volom-borona teo amin'ny sehatry ny fitsaboana tamin'ny alàlan'ny fampitomboana ny mety hanodinana ny fizotry ny fahanterana. Izany no antony, vovoka klôrozôzôzika nikôtinamidia dia nitsidika ny lalantsaran'ny laboratoara fikarohana klinika noho ny fahombiazany amin'ny famadihana ny famantaranandro biolojika.
Ny famaritana simika ny vovoka Nicotinamide Riboside (Chloride)
Fitehirizana temp -20 ° C Frizidera
Ny fahafantarana ny tombotsoan'ny Nicotinamide riboside (NR), inona avy ireo soa azo avy amin'ny Nicotinamide Riboside Chloride?
Ny tombony azo avy amin'ny nikôtinamide riboside chloride vs nikotinamide riboside dia mitovy satria samy miasa izy ireo hampavitrika proteinina NAD sy sirtuin 1.
Metabolism mahasalama amin'ny fitantanana matavy loatra
Ny fikarohana marobe dia nanaporofo ny fahombiazan'ny nikotinamide riboside chloride amin'ny fampihenana ny lanjany. Ireo mpampiasa dia afaka mamoy hatramin'ny 10% amin'ny tavy amin'ny vatany raha tsy misy faneriterena ny faniriana na fiofanana ara-batana.
Ny fihinanana fanafody dia mampihena ny kolesterola LDL sady mampiakatra ny tahan'ny kolesterola tsara. Izany dia mitranga rehefa mitazona ny fihetsiky ny anzima tompon'andraikitra amin'ny famolavolana triglycerides. Vokatr'izany dia miadana ny famokarana lipoproteins ambany.
Nicotinamide riboside chloride dia mandray soa amin'ireo marary be loatra amin'ny diabeta. Ny suplementaire dia mampiroborobo ny metabolisma amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny tsy fahazakana glucose
Rehefa latsaka ambany ambany noho ny optimum ny haavon'ny NAD dia mety ho tandindomin-doza ny rafi-pitondran-tena sy ny fahasalamanao. Raiso, ohatra, ireo marary manana aretin'i Alzheimer dia mampiseho fatra ambany ny tsy fahatomombanan'ny NAD + sy ny mitochondria.
Anisan'ireo fampiasana klôrozika nikôtinamidia klôzida klinika, ny fitantanana ny neurodegeneration amin'ny fahanterana no lohalaharana amin'ny lisitra. Ny zava-mahadomelina dia mihetsika manohitra ny fahasimban'ny intracerebral, ny lalan'ny ischemika, ny fivontosan'ny neurolojia ary ny fahafatesan'ny neuronal.
Fanampiny fanoherana ny fahanterana
Ny iray amin'ireo lakilen'ny nikôlônôzidia klôroôida ilaina amin'ny fampidirana ny fampiroboroboana salama antitra. Ny fitambarana dia mitarika fitomboan'ny famokarana NAD, izay mitana toerana lehibe eo amin'ny sela. Ohatra, mampiakatra ny haavon'ny angovo sela ao anatin'ny hozatra, atiny ary voa. Ankoatr'izay, ny Nicotinamide riboside chloride dia manakana ny tsy fitomboan'ny fitomboan'ny rà amin'ireo taova tena ilaina ireo.
Ny nikotinamide riboside chloride dia mandray soa amin'ny makiazy ara-nofo amin'ny alàlan'ny fanamboarana ny ADN taloha sy simba. Raha latsaka ny fifantohan'ny NAD, ny asidra deoxyribonucleic maratra dia mety miteraka karazana oksizenina mihetsika, mitarika fihenjanana oksidatif, ary mora voan'ny homamiadana.
Ahoana no ahafahan'ny Nicotinamide Riboside Chloride mivadika fahanterana?
Mandritra ny fahanterana, ny vatana dia miova fiovana ara-batana rehefa miverina miverina ny sela. Ohatra, ny vatana mandany ny proteinina NAD + sy SIRT1 noho izy afaka mifangaro. Ny ambaratonga ambany amin'ireto coenzymes ireto dia manafaingana ny fahalevonan-doha ary mamono ireo aretina mifandraika amin'ny taona toy ny diabeta, aretim-po ary ny hatavezina.
Fitantanana klôrozôro ribôzida nikotinamide mahasoa ny hery fiarovana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny lalan-dra, toy ny lymphocytes sy leucosit. Ny fitambarana dia mamelombelona ny famolavolana ny NAD +, noho izany, manatsara ny haavon'ny proteinina SIRT1. Vokatr'izany, ny SIRT1 dia mampihena ny fahanteran'ny lalan-dra amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny rà mandriaka amin'ny hozatra taolana, ny rafi-pitatitra sy ny hozatra.
Ankoatr'izay, famenon-tsolika kôlôidaide nikôtinamidia mamadika ny fahanterana amin'ny famokarana NAD + bebe kokoa hanampiana amin'ny fanamboarana ADN ao anatin'ny rafitry ny sela. Io vokany io dia misoroka ny adin-tsaina oxidative
Ny fikarohana azo raisina ihany koa dia manamafy fa ny nikotinamide riboside chloride dia miatrika ny fihenan'ny taolana, ny fihenan'ny famokarana ranomaso ary ny hypopigmentation fundus. Ireo toe-javatra rehetra ireo dia miparitaka be amin'ireo zokiolona.
Misy precursors NAD + dimy mahery fa amin'izao fotoana izao, azontsika atao ny mamindra ny fifantohantsika amin'ny nikotinamide riboside chloride vs nicotinamide mononucleotide (NMN).
Ireo singa roa ireo dia mampitombo ny haavon'ny NAD + ao amin'ny vatana hanatsarana ny fiasan'ny sela ary hampihena ny fihenan-tsaina.
Ny mampiavaka an'ireo roa ireo dia ny NMN fa tsy endrika vitamina B3. Ny tsimokaretina dia tsy miditra amin'ny sela mandra-pivadika ho ribotide nikotinamidà. Ny antony dia ny haben'ny molekiola misy azy dia lehibe kokoa noho ny vovo-tsolika nikôtinamide riboside chloride. Noho io fananana io, ny bioavailability of NMN sy ny vinavinany hampavitrika ny haavon'ny NAD + dia taolana fifandirana teo amin'ny sehatry ny fikarohana.
Araka ny voalazan'ny Dr. Sinclair, mpahay siansa ao amin'ny Harvard University, ny fahombiazan'ny NMN dia tsy mitovy. Niaiky izy fa nampiasa an'io fanampin, izay mahatonga azy hahatsapa ho tanora sy velombelona. Sinclair dia mitovy amin'ny fahombiazan'ny NMN amin'ny fihazakazahana ao anaty fitoeram-bary. Nanamarika ilay siantifika fa manatsara ny fivezivezen'ny rà, mampiroborobo ny fiaretana hozatra ary ny metabolisma mahomby.
Mifanohitra amin'izany, ny nikotinamide riboside chloride dia entin'ny sela mivantana. Ny molekiola dia soloina vitamina B3. Izy io dia hampitombo ny haavon'ny NAD + mihoatra ny 60% amin'ny vatan'olombelona. Tsy toy ny ankamaroan'ny Mpialoha lalana NAD, izay ao amin'ny lisitry ny fiambenana an'ny FDA, ny nicotinamide riboside (NR) chloride dia ao amin'ny fotsy fotsy amin'ny vokatra GRAS (Amin'ny ankapobeny ekena ho azo antoka) vokatra.
Maninona raha maka vovo-NAD mivantana? Nicotinamide Riboside Chloride vs Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD)
Satria ny fifantohanay dia ny fampisondrotana ny NAD ao amin'ny vatana, mety manontany tena ianao hoe maninona ny tabataba amin'ny nikotinamide riboside chloride Tsy tokony hitantana ve ianao OVER mivantana ao amin'ny rafitranao fa tsy mandalo olana amin'ny fampiasana mpanelanelana toy ny NIAGEN, NR, na NMN? Avelao aho hanazava aminao momba ny nikotinamide riboside chloride vs nikotinamide adenine dinucleotide.
Ny antony lehibe indrindra tsy tokony hitondranao mivantana ny NAD dia satria ny biomarker dia tsy azo sakanana amin'ny sela.
Ny miampy ny fampiasana nicotinamide riboside chloride vs nicotinamide adenine dinucleotide dia ilay voalohany dia azo zakaina amin'ny membrane plasmika. Ny tahan'ny fandraisana azy dia avo kokoa amin'ny alàlan'ny rafi-pandevonan-kanina, ao amin'ny lalan-drà, ary hatramin'ny atidoha.
Nicotinamide riboside (NR) Chloride Dosage: Ahoana no fampiasana?
Tamin'ny taona 2016, ny famenon-tsolika nikôtinamidana klôrozida nahazo ny satan'ny GRAS. Herintaona talohan'izay, ny FDA dia nanaiky azy ho loharanom-niacin ary sakafo fampiasa amin'ny fatra 180mg isan'andro.
Amin'izao fotoana izao, ny habetsaky ny dosie nicotinamide riboside chloride fatra hatramin'ny 300mg isan'andro. Na izany aza, amin'ny fitsapana sasany ataon'ny olombelona, ​​ny lohahevitra dia hihinana hatramin'ny 2000mg ny fanafody. Tokony homarihinao fa ny fatra mihoatra ny doka 500mg dia mety hitarika ho amin'ny voka-dratsin'ny nikôtinamidan'ny ribôzida tsy voafehy.
Ny doka niacin dia mihatra ihany salama olon-dehibe, anisany vehivavy bevohoka sy reny mampinono.
Vokatry ny kôlôdôzônika Nicotinamide Riboside: Azo antoka ve ny mampiasa fanampiana Nicotinamide Riboside Chloride?
Ny vovo-tsolika kôlôdôzôza Nicotinamide dia azo antoka ary mitazona ny toetran'ny zavatra GRAS tena tadiaviny. Ity zava-misy ity dia tsy midika hoe tsy manana soritr'aretina ratsy ny fitambarana. Raha ny marina, fiainana ny rano fa manintona ny fiakarana ratsy kosa rehefa manararaotra azy ianao. Mba hanoherana ny voka-dratsy dia alao antoka fa ambany farafahakeliny araka izay azo atao ny fatrany Nicotinamide riboside chloride.
Ny sasany amin'ireo fiatraikany ratsy dia misy;
Ny fiota amin'ny hoditra toy ny maimaika ary mihombo ny mangana
Ankoatra ny voka-dratsin'ny nikôtinamide riboside chloride etsy ambony dia mety hiaina izany koa ianao levitra. Na izany aza, ity vokatra ity dia fitahiana tsy azo ohaina indrindra raha toa ka mihoa-pefy ianao, matavy loatra, na manandrana mitazona ny lanjanao.
Aiza no hividianana (NR) Nicotinamide Riboside Chloride amin'ny Bulk?
Azonao atao ny mividy nicotinamide riboside chloride mividy amin'ny fivarotana an-tserasera. Na mila vovo-tsolika amin'ny ambaratonga lehibe na famenon-tsakafo aza ianao dia ataovy izay hijerena mpamatsy tena izy. Ny miampy ny fiantsenana virtoaly dia ny ahafahanao mampitaha ny vidiny sy mijery ny hevitry ny mpanjifa amin'ny fotoana tena. Na izany aza, mety ho latsaka amin'ny hosoka ihany koa ianao.
Marika azo itokisana izahay ary manaraka ny fepetra fanaraha-maso kalitao ny vokatray rehetra. Miatrika akora simika isan-karazany sy sakafo fanampin-tsakafo. Mifandraisa aminay noho ny kaomandinao sy ny teny nalaina tamina namana.
Conze, D., Brenner, C., & Kruger, CL (2019). Ny fiarovana sy ny metabolisman'ny fitantanana maharitra ny NIAGEN (Nicotinamide Riboside Chloride) amin'ny fitsapana ara-pahasalamana mifandanja, jamba roa, placebo mifehy ny olon-dehibe matavy loatra. Tatitra momba ny siansa.
Bogan, KL & Brenner, C. (2008). Nicotinic Acid, Nicotinamide, ary Nicotinamide Riboside: fanombanana Molecular ny otrikaina NAD + mialoha amin'ny sakafo maha-olombelona. Famerenana isan-taona ny sakafo mahavelona.
Mehmel, M., Jovanovic, N., & Spitz, U. (2020). Nicotinamide Riboside - Ny toetran'ny fikarohana ankehitriny sy ny fampiasana fitsaboana.
Turck, D., Castenimiller, J., et al. (2019). Ny fiarovana ny Nicotinamide Riboside Chloride amin'ny mahavelona sakafo arakaraka ny fitsipika (EU) 2015/2283 sy ny Bioavailability of Nicotinamide avy amin'ity Source ity, ao amin'ny Context of Directive 2002/46 / EC. Gazety EFSA.
Elhassan, YS et al. (2019). Ny Nicotinamide Riboside dia mametaka ny hozatry ny taolam-paty NAD + metabolome ary mitarika sonia transcriptomika sy anti-inflammatoire. Tatitra sela.
Aman, Y., Qiu, Y., Tao, J., & Fang, EF (2018). Ny hery fitsaboana azo avy amin'ny fampiroboroboana ny NAD + amin'ny aretina mihantitra sy mifandraika amin'ny taona. Fitsaboana amin'ny fahanterana.
NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE (NMN) POWDER (1094-61-7)
1.Nicotinamide riboside (NR) sy nikotinamide riboside (Chloride)
2.Ny famaritana simika ny vovoka Nicotinamide Riboside (Chloride)
3.Fahafantarana ny tombo-tsoa azo avy amin'ny ribotide Nicotinamide (NR), inona avy ireo soa azo avy amin'ny Nicotinamide Riboside Chloride?
4.Fomba ahoana no ahafahan'ny Nicotinamide Riboside Chloride mivadika fahanterana?
5.NAD⁺ Mpialoha lalana: Nicotinamide Riboside Chloride vs Nicotinamide Mononucleotide
6.Nahoana no tsy mandray volo NAD mivantana? Nicotinamide Riboside Chloride vs Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD)
7.Nototinamide riboside (NR) Chloride Dosage: Ahoana no fampiasana?
8.Nicotinamide Riboside Chloride Side effects: Azo antoka ve ny mampiasa fanampiana Nicotinamide Riboside Chloride?
9.Aiza no hividianana (NR) Nicotinamide Riboside Chloride amin'ny be indrindra?